Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya oo ka war bixiyay Shirka Washinton iyo waxyaabahii uu ku saabsanyahay – Walaal24 Newss
Wasiirka Maaliyadda Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Mudane Abdirahman Duale Beyle oo kamid ah wafdiga Ra’iisal- wasaaraha dalka ee ku sugan Mareykanka ayaa wareysi kooban oo dhinacyo badan taabana siiyey Warbaahinta Qaranka.
Wasiirka ayaa tilmaamay waxay Magaalada Washinton DC u joogaan, wuxuuna tilmaamay in Shirarku inta badan ay ku saabsan yihiin arrimo ku saabsan Deyn cafiska iyo waxyaalo kale oo farabadan oo ay ka mid yihiin Daabacaadda Shilinka Soomaaliga, iyadoo inta badan maanta lagu mashquulsanaa la kulanka Madaxda kala duwan ee Bangiga Addunka iyo qeybo kale ee ay khuseyso arrinteynu oo ay ka mid tahay Tan Lacagta Adduunka IMF-ta.
Wasiir Beyle ayaa sheegay in Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Khayre, uu kulan kula qaatay madaxweynaha cusub ee Bangiga Adduunka, David Malpass, iyagoo ka wada hadlay dardar-gelinta howlaha dib-u-habeynta hey’adaha dowladda iyo kaalinta uu bangiga adduunku ka geysanayo.
Kulankan ayaa qeyb ka ah kulamo uu Ra’iisul Wasaaruhu la yeelanayo madaxda bangiga adduunka, hey’adda lacagta dunida ee IMF iyo hey’adaha maaliyadda adduunka ee Washington ku kulansan.
Daawo: Madaxweyne Farmaajo oo khudbad ka jeediyay Munasabada Sanadgurada 59aad Ciidmada Xooga Dalka
Madaxweynaha Galmudug oo Sagootin usameeyay Xubna ka Tirsan Aqalka Sare, Dacwadana U Gudbiyay
Sawiro: Taliye Gorod oo Cutubyo ka tirsan Ciidanka xoogga dalka oo tababar u soo xiray
Golaha Ammaanka oo baaq u soo diray Xukuumadda Soomaaliya iyo dowlad gobolleedyada xubnaha ka ah